Tsy misy andrana tanteraka, sy ny mpikaroka no lasa be dia be azo atao voambolana mba hilazana zava-manahirana. Mampanan-kery dia manondro ny haben'ny izay ny vokatry ny fanandramana iray manokana manohana ny sasany ankapobeny kokoa famaranana. Mpahay siansa ara-tsosialy mahita tsara ny nizara efatra lehibe kery ho karazana: antontan'isa fanatsoahan-kevitra manan-kery, anatiny manan-kery, fanorenana manan-kery, ary manan-kery any ivelany (Shadish, Cook, and Campbell 2001, Ch 2) . Ny fifehezana hevitra ireo dia hanome anao ny lisitra ara-tsaina ho an'ny critiquing sy fanatsarana ny famolavolana sy ny fandalinana ny fanandramana, dia hanampy anao hifandray amin'ny hafa mpikaroka.
Antontan'isa famaranana kery mifantoka manodidina na ny antontan'isa fanadihadiana ny andrana natao tsara. Ao amin'ny teny manodidina ny Schultz et al. (2007) izany fanontaniana mety hifantoka amin'ny na computed ny t-soatoavina marina. Antontan'isa fanadihadiana dia any an-dafin'ny votoatiny amin'ity boky ity, saingy azoko lazaina fa toro lalana ny antontan'isa ilaina hanao ny mari ary hadihadiana fanandramana tsy niova amin'ny taona nomerika. Na izany aza, ny hafa angona tontolo iainana amin'ny dizitaly fanandramana no mamorona vaovao antontan'isa fahafahana (ohatra, mampiasa milina fianarana fomba mba haminavina heterogeneity ny fitsaboana vokatry (Imai and Ratkovic 2013) ) ary vaovao kajy amin'ny solosaina, olana (ohatra, fanakatonana in goavana fanandramana (Higgins, Sävje, and Sekhon 2016) ).
Kery anaty toeram manodidina na ny fanandramana dia natao araka ny tokony ho fomba fiasa. Niverina ho fanandramana ny amin ' Schultz et al. (2007) , ny fanontaniana momba ny anatiny kery mety hampifantoka manodidina ny randomization, fanaterana ny fitsaboana, sy ny fandrefesana ny vokatra. Ohatra, mety ho miahiahy fa ny fikarohana mpanampy tsy namaky ny herinaratra metatra reliably. Raha ny marina, Schultz sy mpiara-miasa dia manahy ity olana ity, ary izy ireo nanana santionan'ny metatra mamaky indroa; soa ihany, ny vokatra ankapobeny dia mitovy. Amin'ny ankapobeny, Schultz sy ny mpiara-miasa aminy 'andrana Toa avo anatiny manan-kery, fa izany no tsy foana ny raharaha; sarotra saha sy ny aterineto fanandramana matetika mihazakazaka ho olana raha ny marina nanolotra ny fitsaboana tsara ho any ny olona tsara sy ny nandrefesany ny vokatra ho an'ny rehetra. Soa ihany fa ny vanim-potoana nomerika dia afaka manampy hampihenana ny olana momba ny anatiny manan-kery satria mahatonga mora kokoa mba ho azo antoka fa ny fitsaboana Fa raha atolotra ho natao ho an 'ireo izay tokony handray izany sy ny handrefesana vokatra ho an'ny mpandray anjara rehetra.
Mampanan-kery hanorina toerana manodidina ny lalao eo amin'ny tahirin-kevitra sy ny ara-constructs. Araka ny noresahina tao amin'ny Toko 2, constructs ireo hevitra saro-takarina fa ny mpahay siansa ara-tsosialy momba ny antony. Indrisy anefa, ireo hevitra saro-takarina tsy foana famaritana mazava sy ny refiny. Niverina tany Schultz et al. (2007) , ny filazana izay fenitra ara-tsosialy injunctive afaka mitaky fampiasana herinaratra hampidina mpikaroka hanao ny mari ny fitsaboana izay fitaovana "fenitra ara-tsosialy injunctive" (ohatra, ny emoticon) ary ny handrefesana "fampiasana herinaratra". Amin'ny Analog fanandramana, mpikaroka maro no natao ny fitsaboana, ary norefesiny ny vokatra. Izany fomba izany no miantoka, araka izay azo atao, ny fanandramana mitovy ny saro-takarina constructs ianarany. Amin'ny nomerika fanandramana izay mpikaroka mpiara-miasa amin'ny orinasa na fitondram-panjakana mba hamonjy fitsaboana sy mampiasa foana-on angon-drakitra rafitra handrefesany vokatra, ny lalao eo amin'ny fanandramana sy ny ara-constructs dia mety ho kely mafy. Noho izany, manantena aho fa manan-kery Manambatra dia mirona ho lehibe kokoa ahiahiny amin'ny fanandramana noho ny Analog dizitaly fanandramana.
Farany, manan-kery ivelany mifantoka manodidina na ny vokatry ny andrana ity dia generalize ny toe-javatra hafa. Niverina tany Schultz et al. (2007) , misy afaka manontany, dia io hevitra ihany-manome vaovao ny olona momba ny fampiasana angovo eo amin'ny fifandraisana ny namany sy ny tsato-kazo famantarana ny injunctive fenitra (ohatra, ny emoticon) -reduce fampiasana angovo raha natao tamin'ny fomba hafa ao amin'ny toerana hafa? Fa tena tsara natao ary tsara-mihazakazaka fanandramana, olana momba ny any ivelany no mampanan-kery ny mafy indrindra mba hiatrehana. Taloha, ireo adihevitra momba ny ivelany kery dia matetika fotsiny bunch ny olona izay nitoetra tao amin'ny efitra iray miezaka ny sary an-tsaina ny zavatra mety ho nitranga raha toa ka ny fomba fiasa dia natao tany fomba hafa, na any amin'ny toerana hafa, na amin'ny olona samihafa. Soa ihany fa manome fahafahana ny taona nomerika mpikaroka mba hifindra any an-dafin'ny data-maimaim-poana ireo fanombantombanana sy hanombana empirically kery ivelany.
Satria ny vokatra avy amin'ny Schultz et al. (2007) no izy mahafinaritra, orinasa atao hoe Opower niasa tamin'ny Asa vaventy any Etazonia mba miisa be kokoa ny fitsaboana. Miorina amin'ny ny famolavolana ny Schultz et al. (2007) , Opower Noforonina namboarina Home Energy Reports nanana Modules roa lehibe, ny iray mampiseho ny herinaratra ny tokantrano momba ny fampiasana ny mpiara-monina miaraka amin'ny emoticon, ary ny iray nanome toro-hevitra noho ny fampidinana fampiasana angovo (Sary 4.6). Avy eo, amin'ny fiaraha-miasa amin'ny mpikaroka, Opower nihazakazaka randomized fanandramana mba hijery ny fiantraikan'ny ny Home Reports ny Angovo. Na dia ny fitsaboana ireo fanandramana ara-batana dia matetika nanolotra-matetika amin'ny alalan'ny efa lany sifotra Mail-ny vokatra dia norefesiny mampiasa fitaovana nomerika ao amin'ny tontolo ara-batana (ohatra, fahefana metatra). Tsy tanana manangona vaovao ity amin'ny fikarohana mpanampy mitsidika isan-trano, ny Opower fanandramana rehetra dia atao amin'ny fiaraha-miasa amin-kery orinasa afaka ny mpikaroka mba mahazo ny fahefana famakiana. Noho izany, amin'ny ampahany ireo Hafanàm-po an saha dia nihazakazaka fanandramana amin'ny sehatra goavana amin'ny vidiny ambany miova.
Sary 4.6: The Home Energy Reports in Allcott (2011) nanana Fampitahana Module sosialy sy ny Action Dingana Module.
Ao amin'ny voalohany napetraka ny andrana momba 600.000 fianakaviana nanompo tamin'ny 10 jiro orinasa manodidina ny United States, Allcott (2011) nahita ny Home Report Angovo nampidininy herinaratra fanjifana amin'ny 1,7%. Amin'ny teny hafa, ny vokatra avy amin'ny lehibe maro, samihafa ara-jeografika kokoa ny fianarana dia hatsarana, mitovy amin'ny ny vokatra avy amin'ny Schultz et al. (2007) . Kanefa, ny vokatry haben'ny dia kely: in Schultz et al. (2007) ny tokantrano ao amin'ny famaritana sy fitsipika injective fepetra (ny iray miaraka amin'ny emoticon) nampihena ny fampiasana herinaratra amin'ny 5%. Ny marina antony izany maha samy hafa tsy fantatra, fa Allcott (2011) naminavina fa ny fandraisana ny sora-tànana emoticon izay tafiditra ao ny fianarana tohanan'ny oniversite mety ho lehibe kokoa vokany eo amin'ny fitondran-tena noho ny mandray vita pirinty emoticon izay tafiditra ao ny faobe vokatra tatitra avy amin'ny fahefana orinasa.
Ankoatra izany, amin'ny fikarohana tatỳ aoriana, Allcott (2015) Nitatitra fanampiny 101 fanandramana momba fanampiny 8 tapitrisa tokantrano. Ao ireo fanandramana 101 manaraka ny Home Report Angovo nanohy ny mahatonga ny olona mba hampidina ny herinaratra fanjifana, fa ny vokany dia aza kelikely kokoa. Ny marina izany fihenan'ny isan'ny antony tsy fantatra, fa Allcott (2015) naminavina fa ny fahombiazan'ny ny tatitra niseho ho mihena ny fotoana, satria raha ny marina dia ho ampiharina amin'ny karazana mpandray anjara. More manokana, fitaovam-pandraisana ao amin'ny faritra ny tontolo iainana bebe kokoa dia azo inoana kokoa manangana ny fandaharana teo aloha sy ny mpanjifa nety nandray kokoa ny fitsaboana. Toy ny Asa vaventy amin'ny tontolo iainana mpanjifa tsy nandray ny fandaharana, ny fahombiazany niseho mandà. Noho izany, toy ny ao amin'ny fanandramana randomization antoka fa ny fitsaboana sy ny fanaraha-maso ny vondrona dia toy izany koa, randomization amin'ny fikarohana toerana antoka fa ny vinavina azo ankapobeny avy amin'ny vondrona iray ny mpandray anjara amin'ny ankapobeny kokoa ny mponina (mieritreritra Chapter 3 momba ny santionany). Raha fikarohana toerana tsy sampled tsapaka, dia generalization-na dia avy amin'ny tsara natao ary nitarika andrana-mety ho olana.
Miara, 111 ireo fanandramana-10 in Allcott (2011) ary ny 101 ao amin'ny Allcott (2015) -involved tokony ho 8.5 tapitrisa fianakaviana avy amin'ny manerana ny United States. Hatrany izy ireo mampiseho fa Home Energy Reports hampihena ny fanjifana herinaratra eo ho eo, vokatr'izany izay manohana tany am-boalohany hitan'ny Schultz sy mpiara-miasa avy amin'ny trano 300 any Kalifornia. Ankoatra replicating fotsiny ireo vokatra am-boalohany, ny fanohizana ny fanandramana koa mampiseho fa ny haben'ny ny vokany miovaova ny toerana. Napetraka ny andrana ity mampiseho ihany koa ny hevitra ankapobeny roa hafa momba ny Hafanàm-po an saha ampahany fanandramana. Voalohany, mpikaroka dia ho afaka ny empirically adiresy olana momba ny ivelany mampanan-kery, rehefa ny vola lany amin'ny nihazakazaka andrana dia ambany, ary mety hitranga raha toa ka ny vokany dia efa ho refesina iray foana-eo amin'ny tahirin-kevitra rafitra. Noho izany, dia toa manondro fa fikarohana dia tokony ho eo amin'ny jereo-ho an'ny hafa, ary manan-danja mahaliana fitondrantena izay efa ho voarakitra ao, ary avy eo dia mamaritra fanandramana an-tampon'ny ity foto-drafitrasa efa misy famarana. Faharoa, izany andian-andrana mampahatsiahy antsika fa nomerika saha dia tsy fanandramana aterineto fotsiny; hatrany aho, manantena fa ho maro eny rehetra eny amin'ny vokatra refesina amin'ny Sela Mpandray Hafanana ao amin'ny nanorina tontolo iainana.
Ny efatra karazana kery-antontanisa famaranan kery, anatiny manan-kery, fanorenana manan-kery, ivelany kery-tsaina manome lisitra mba hanampiana ny mpikaroka hanombana raha ny vokatra avy amin'ny fanandramana manokana manohana ny ankapobeny kokoa famaranana. Raha oharina amin'ny taona Analog fanandramana, amin'ny vanim-potoana nomerika fanandramana dia tokony ho mora kokoa ny miresaka ivelany kery empirically ary dia tokony ho mora kokoa ny hahazoana antoka anatiny kery. Etsy an-danin'izany, olana ny fanamboarana kery dia mety ho sarotra kokoa amin'ny vanim-potoana nomerika fanandramana (na izay tsy nitranga tamin'ny fanandramana ny Opower).